१० हप्तामा ओमिक्रोन संक्रमणका ९ करोडभन्दा बढी केशः विश्व स्वास्थ्य संगठन
एजेन्सी । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का महानिर्देशकले कोरोना भाइरसको भेरियन्ट ओमिक्रोनबाट १० सातामा ९ करोडभन्दा बढी संक्रमित भेटिएका छन् । सन् २०२० मा रिपोर्ट गरिएको कुल संख्या भन्दा यो बढी हो। कोभिड–१९ को महामारी सन् २०२० मा सुरु भएको थियो ।
'ओमिक्रोनको खतरा अझै टरेको छैन'
एजेन्सी । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले बारम्बार विश्वका सबै देशलाई कोरोना भाइरसको भेरियन्ट ओमिक्रोनबारे सचेत गराउँदै आएको छ । डब्लुएचओका अनुसार खतरा अझै समाप्त भएको छैन ।
एउटा यस्तो देश जहाँ ४० मिनेटमात्रै रात हुन्छ !
एजेन्सी । नर्वे विश्वको धनी देशको सूचीमा परेसँगै निकै सुन्दर पनि छ । यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यले मनलाई मोहित बनाउँछ । आर्कटिक सर्कलमा अवस्थित नर्वेमा सूर्यास्त मात्र ४० मिनेटमा हुन्छ, त्यसैले यो देशलाई मिडनाइट सनको भूमि पनि भनिन्छ।
एक महिला बक्सरले आफ्नै श्रीमानको कुटीकुटी हत्या गरेपछि...
एजेन्सी । एक व्यवसायिक महिला बक्सरले आफ्नो श्रीमानलाई कुटीकुटी हत्या गरेकी छन् । श्रीमानको हत्याको आरोपमा श्रीमतीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र प्रमाण पेश भइसकेको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
राजकुमारको नीलो हीरा र बहुमूल्य रत्न चोरिएपछि कसरी चिसिएको थियो थाई-साउदी सम्बन्ध ?
साउदी अरब र थाईल्यान्डले हीरा र बहुमूल्य रत्न चोरी तथा शृङ्खलाबद्ध हत्यासँग सम्बन्धित ३० वर्ष पुरानो एउटा विवाद अन्त्य गरेका छन्। थाईल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रायुत चान ओचाको रियाद भ्रमणका क्रममा यी दुई देशबीच पूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध पुनः स्थापित भएको छ। एक साउदी राजकुमारका लागि काम गर्ने थाई सफाइ कर्मचारीले सन् १९८९ मा केही रत्नहरू चोरेका थिए।
इलोन मस्कको स्पेस एक्स रकेट चन्द्रमामा ठोक्किने बाटोमा
एजेन्सी । इलोन मस्कको अन्तरिक्ष अन्वेषण कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको एउटा रकेट चन्द्रमामा ठोक्किएर विस्फोट हुने बाटोमा अघि बढेको छ। फाल्कोन ९ बूस्टर नाम दिइएको उक्त रकेट सन् २०१५ मा प्रक्षेपण भएको थियो।
नयाँ कोरोना भाइरस निओकोभलाई लिएर चिनियाँ वैज्ञानिकहरुले दिए चेतावनी
एजेन्सी । विश्वमा कोरोना भाइरसको संक्रमण लगातार बढ्दै गएको छ र दिनहुँ लाखौं मानिसहरु यस महामारीको सिकार भइरहेका छन् । यसैबीच, चीनको वुहानका वैज्ञानिकहरूले दक्षिण अफ्रिकामा फेला परेको नयाँ कोरोना भाइरस निओकोभबारे चेतावनी दिएका छन्।
युरोप जोड्ने रुसी ग्यास पाइपलाइन सञ्चालन हुन नदिने अमेरिकी चेतावनी
एजेन्सी । संयुक्त राज्य अमेरिकाले मस्कोले युक्रेनमा आक्रमण गरे रुसी ग्यासलाई पश्चिम युरोप पठाउने एउटा प्रमुख पाइपलाइन खोल्ने निर्णय अवरुद्ध बनाइदिने जनाएको छ। नोर्ड स्ट्रिम टु रुसबाट जर्मनीसम्म निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको पाइपलाइन हो।
यमराजको घरको प्रवेशद्वार !
यमराज कहाँ रहन्छन् भन्ने कुरा कसैलाई थाहा भने छैन । तर पृथ्वीमा एक यस्तो ठाउँ रहेको छ, जहाँ एक रहस्यमयी ढोका छ । त्यस ढोकालाई ‘यम द्वार’ अर्थात् ‘यमराजको घर प्रवेश द्वार’ भनिन्छ । उक्त ढोका पवित्र कैलाश पर्वतको बाटोमा रहेको छ ।